Ny vaovao lehibe indrindra amin'ny One UI 3.0 ao amin'ny Galaxy S20 | Androidsis
Na dia maro aza ny terminal Galaxy izay mahazo ny fanavaozana One UI 2.5, afaka mandray a izao isika Jereo haingana ny One UI 3.0 izay hita amin'ny beta amin'ny Galaxy S20.
Ary eny, miresaka momba izany isika Android 11 kinova ny Galaxy izay tokony handray azy amin'ny farany na amin'ny fiandohan'ny taona manaraka (ary mba farano izao). Afaka niditra pikantsary vitsivitsy momba izay hahafahanay mandray tanana izahay rehefa manavao ny One UI 3.0. Ataovy.
1 Panel vaovao fidirana haingana
2 Fifanarahana vaovao ho an'ny volavola
3 Ary noho izany misy ny telo amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra
4 Adidy «Android»
5 Inona no vaovao ao amin'ny Bixby Routines
6 Antsipiriany hafa momba ny One UI 3.0
Panel vaovao fidirana haingana
Ao amin'ny One UI 3.0 dia afaka miditra voalohany isika ny ankamaroan'ny manova izany nesorina ny tontonana fidirana haingana ary izany dia mampiseho ny habetsaky ny endrika kanto amin'ity fanavaozana ity.
Un "Gaussian" effet blur ahafahantsika mijery an'izay rehetra ananantsika amin'ny birao sy manome hasina ireo singa UI ao amin'ny tontonana fidirana haingana.
Fifanarahana vaovao ho an'ny volavola
Zava-baovao iray hafa mifandraika akaiky amin'ny traikefan'ny mpampiasa sy ny famolavolana ny iray amin'ireo lafiny ampiasainay indrindra mandritra ny andro, ary tsy iza izany fa ny ny bara volume izay avy amin'ny marindrano hifindra amin'ilay endrika mitsangana kokoa.
Ny marindrano dia Mijanona izany ka avy amin'ilay «slider» na slider mitsangana ny volume azontsika atao ny manitatra ny loharanom-baovao sisa tavela toa ny fampandrenesana, haino aman-jery, sns. Fiovana lehibe ho an'ny traikefa iray hafa amin'ny One UI 3.0 ary raisinay satria tsara ny sary.
Ary noho izany misy ny telo amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra
Miresaka momba izany isika Fampiharana farany, efijery an-trano sy hidy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ireo habaka telo natao ho an'ny One UI 3.0 ary raha hitanao amin'ny sary dia tsy hoe nahazo fanovana holazaina izy ireo.
Mbola manana ny hitsin-dàlana etsy ambany ho an'ny fakantsary izahay ary miantso eo amin'ny efijery hidin-trano. Aiza no misy a nisy fiovana lehibe tato ho ato miaraka amin'ity karatra fampiharana ity ahitantsika fa mila habaka afovoany lehibe kokoa izy ary ilay teo aloha kely kokoa raha oharina. Ho an'ny ambiny kely sisa hanampy.
Izahay dia manondro ny adidy "Android" amin'ny antony anaovana izany afaka mandefa fanavaozana amin'ny telefaona Android mila havaozina na ampidirina fotsiny izay rehetra mifandray amin'ny Android 11 ary izay fantatsika momba ny Pixel sy ny telefaona hafa mandritra ny andro maro.
Anisan'ireo zava-baovao ireo miresaka momba ny bubble mitsinkafona izahay ao amin'ny hafatra ho an'ny fampiharana chat, na ny alalana azontsika omena indray mandeha. Mazava ho azy, azontsika atao ny manadino ireo fiasa vaovao hafa toy ny Device Controll, Quick Access to Wallet, Media Controll, ary Quick Setting na resaka amin'ny fampandrenesana.
Izany dia nilaza, ny ankamaroan'ny fiasa Efa anananay any Samsung efa ela izy ireo, noho izany isika dia miatrika ny iray amin'ireo tombony amin'ny fananana Galaxy, ankoatry ny mampiavaka azy manokana amin'ny fampitaovana, efijery, sns.
Inona no vaovao ao amin'ny Bixby Routines
mahaliana ary koa ny vaovao ho an'ny Bixby Routines ary izany dia mamela automatisation tena mahaliana. Anisan'ireo zava-baovao ireo mety hanamboarana ny kisary isaky ny mahazatra, jereo ireo fihetsika izay averina rehefa tapitra ny fahazarana iray, manaova safidy fidirana maro amin'ny fotoana iray, ampandehanana Bixby ary ampiasao fepetra vaovao izay misy fotoana manokana, tamba-jotra WiFi, fifandraisana Bluetooh ary antso avy amina fifandraisana manokana na fifandraisana rehetra.
Antsipiriany hafa momba ny One UI 3.0
Araka ny efa nanontanian'ny maro. Ity ny sarimiaina avy amin'ny OneUI 3 mialoha beta 1 pic.twitter.com/IVzXD6r1se
- Rydah | Samsung Daddy (@SamsungRydah) Septambra 15, 2020
Farany, ary toy ny teo aloha, satria be dia be ny lisitra, manana isika fomba bateria vaovao antsoina hoe "fampiasana bateria farany ambany", ary izany dia mihatra amin'ny lohahevitra maizina, trano kely indrindra ary mametra ny fampiasana ny bateria amin'ireo rindranasa.
Afaka miantehitra ihany koa isika fomba iray izay hanome plus ho an'ny fahombiazan'ny telefaona, fidirana mora amin'ny sehatry ny fitendry, DeX tsy misy tariby ho an'ireo Galaxy izay tsy nahazo azy tamin'ny 2.5, ary ny sary namboarina manokana ho an'ny antso an-tarobia.
Andao hiandry antsika hahalala isika hoe rahoviana no hisy beta tonga amin'ireo faritra ireo ary afaka mizaha toetra ireo vaovao ireo isika UI 3.0 iray amin'ny Samsung Galaxy izay hitantsika hatramin'ny XDA; ary raha ny lalana dia hihamaro hatrany izy ireo misaotra ny fanohanan'ny fanavaozana 3 taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ity dia iray UI 3.0 amin'ny beta amin'ny Galaxy S20 miaraka amin'ny Android 11